तपाई ,दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस्, केही दिनमा हुन्छ चमत्कार!!! – News Nepali Dainik
तपाई ,दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस्, केही दिनमा हुन्छ चमत्कार!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: २०:४९:१४
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Last Updated on: February 24th, 2021 at 8:49 pm
३६६६ पटक हेरिएको